Inkathi Knights nalapho abaningi ababephila nabo, futhi kule amanoveli ka abalobi izikhathi okwalandela. Romance, nezimfihlakalo futhi ngezinye izikhathi zimbozwe yena paladin, Isiqubulo knightly, elingenamikhono, indlela yokuphila, service, nenekazi bakhe abathandekayo. Njengomthetho, babengamaqhawe abanolaka, kodwa imisebenzi amahle kwezincwadi baye balibangisa esiphoqayo nendlu - lapho ufuna ukuchaza le ndoda, ibizwa ngokuthi knight.
Futhi isandla kulesi hhayi kuphela imisebenzi yobuciko. Iziqubulo Knights medieval ababe imfanelo ebaluleke kakhulu wonke isithombe, azikhulumele. Bonke zingahlanganiswa ngaphansi kwesiqubulo esithi ezivamile - ". Nkulunkulu, owesifazane, iNkosi" Nakuba kwakunabamemezeli impela eningi Isiqubulo longeke watibona netintfo yimikhuba: "Elinye ngeke" noma "Ngiphakathi ngokwami noma abantu" nokunye. Kodwa kakhulu, Knights KweNkathi Ephakathi, njengoba enzeka, zifanekisela ukuhlonipheka imicabango, imizwa, izenzo kanye ngazisa ukuthi wonke amandla namakhono, kakhulu ukuphila kwabo uzoqondiswa isevisi futhi ngivikele lawobaba, ukholo nothando.
Umsuka ikhodi chivalric udumo
Izinhloso Ezinhle enhle, ngoba kusekelwe edume wizadi Merlin, afundise futhi uyala Knights of iNkosi Arthur. Amazwi akhe amahle wenza Ikhodi behlonipha knighthood. Ngesisekelo le limenyezelwe kwezinkambiso esibophezelayo yokuziphatha, ngokuhamba kwesikhathi lo mfanekiso iqhawe baba romantic kakhulu. Ivanhoe, uRoland, Sid, Knights of the Round Table, eholwa iNkosi Arthur, Tristan - kubala lezi zithombe ezimangalisayo kungaba eside. Bonke babeyizinceku Isiqubulo knight sika, okuyinto ngokuvamile ukhiphe phezu izingalo, kodwa ngokuyisisekelo wayengomunye - lwesevisi ekhethiwe ekahle. Njenganoma yimuphi mkhuba, uvele Chivalry, bachuma, banyamalala njengeqembu engadingekile futhi ngisho kamuva wabasola. Kodwa odlale indima yayo yomlando, ikakhulukazi ekusakazekeni kobuKristu.
Futhi uma Knights wasenganekwaneni the Round Table, noma indawo yangempela King uRichard the Lionheart, ambozwe i aura elikhangayo, kuncane ezinhle ezingaba ishiwo zamaJalimane, Livonia Polish zamahhashi ayehlome eyizingovolo. Naphezu Isiqubulo le uyakufanelekela kakhulu knight sika zokugcina - "Nkulunkulu, Ukuhlonishwa, wobaba" - abayikho ubuzenzisi sikhathazeke kabanzi, usongo nokukhaphela. Uma khumbula Battle Eqhweni ke igama elithi "Knights", phambi kwamehlo ume yini amaqhawe elikhulu nge ukuziphatha elinendawo ucezu lensimbi ingena emanzini. Esikhathini Chivalry medieval ezikhangayo kwakuwukuthi kwaba lombhalo ehlukile kwabantu, lapho bonke babelingana, naphezu umsuka. Phela, knight ubengase ube yindoda sasivumela ocebile, kodwa izimali ayengebona okufanayo. Ukuze ungene ku futhi izinduna nabantu abavamile mendicant. Kodwa babeyizinceku yobuzalwane.
Njengoba sekuphawuliwe kakade, yisiqubulo Knights zazihlukile, kodwa ekuqaleni bonke, amasosha athatha isifungo sokwethembeka ezinye enhle, okungukuthi umgomo, njengoba umthetho, babebahle. Phela, abafana kusukela ebuntwaneni wanika kuqala amakhasi, bese Squires, futhi kusukela esemncane bakhulela umoya inkonzo imigomo ethize zasebukhosini. Imibono ka Chivalry kwamiswa amakhulu eminyaka, futhi okuhlala zalo eziyisisekelo ngeke ulahlekelwe ukuhlobana kunanini ngaphambili. Empeleni, ekahle izimfanelo wesilisa esivela kuzo zonke izikhathi. Heroes of Ancient Greece neRoma, Russian namaqhawe, samurai Japanese, amasosha Arab - bonke babe Isiqubulo knight sika "udumo nehlazo". Capacious futhi icacile. Mfushane nezinye iziqubulo, njengokuthi "Ngingu bakwazi ukuphatha." Okuningi emfushane, futhi okubaluleke - kulula ukukuqonda, akunakwenzeka ukuchaza umuntu, uyakwazi ukwenza noma yimuphi umsebenzi. Noble futhi capacious Isiqubulo iqhawe ephakathi "Ngaphandle ukuthopha ekhashelwa" kwaba kuhle ukuthi uMbusi uPawulu mina, ukhishwa umklomelo walo Arakche'ev ekugcineni isihloko Ukubala. Lokhu kusikisela ukuthi izimiso Chivalry njalo kusesimweni.
Knighthood - lokhu stratum ethile eyenziwa ngenkathi ephakathi emphakathini. Wawunodonga izimfanelo zayo, inalienable kusuka isithombe - izifungo, tournaments, izifanekiselo mottos Knights, kwasempini, amasiko, ikhodi yokuvula isikweleti ikakhulukazi udumo, okuhlanganisa kanye nemithetho yokuziphatha emphakathini. Ukubukeka omele lokhu lombhalo, futhi, ine siqu, izici zalo wayo okhethekile, okungase ukunquma ngokunembile knight. Kungenzeka yini ukucabanga paladin ngaphandle ihhashi, izivikelo inkemba futhi cape? Ngaphandle ihhashi kungaba lapho ema kwenye amadolo, nge zithukululwe izinwele zakhe phambi Beautiful lady. Kodwa njengoba umthetho, uma ngesandla esisodwa nesigqoko sakhe kwesinye - izinso. Kukhona isithombe ezimisiwe, futhi kuphela izici zakhe esingokwemvelo.
Njengoba sekushiwo, yisiqubulo Knights Ephakathi zazihlale emfushane futhi okuthe juqu. Ngezinye izikhathi, uma umnikazi kwaba isiqubulo wokuqala aqukethe ngohlamvu olulodwa. Band of Brothers babelazi iqiniso ukuthi limelela, futhi imfihlakalo futhi inkolo eyayinaso bekulokhu esivela la masosha romanticists ngaphandle kokwesaba futhi bengasoleki. Umqondo sivezwe kula yisiqubulo credo the knight sika, izimiso zokuphila kwakhe.
Ngokwesibonelo, "Bliss zokuhambisana", "esidladleni Blow wengonyama ukunqoba", njalo njalo. Kufanele kuqashelwe ukuthi kwawona mottos ayehlukaniswe amaqembu amathathu - abacaphuni, eqinisweni abacaphuni okulotshwayo yomlomo, ezivamile. Iziqubulo babe siqu futhi ejwayelekile, ngobulili ezizukulwaneni ngezizukulwane, futhi ukukhonza izindinganiso zokuziphatha kanye educative ukuze kuzuze izizukulwane ezizayo. Kukhona mottos isimo - e Tsarist Russia kwaba inkulumo ethi "UNkulunkulu unathi" eSoviet Union - "Basebenzi wonke amazwe, hlanganani!" Manje amazwe amaningi abe siqu isimo Isiqubulo sabo.
Ngesikhathi Knights Ephakathi kwaba isiqubulo uqoshwe elingenamikhono izingalo, isibonelo, eNgilandi - phezulu eScotland - engxenyeni engezansi izingalo, okuyinto yena, futhi isici esibalulekile knight. elingenamikhono ephakathi knight wokuqala izikhali uvele X leminyaka, kanye no- XII, kakade base ku knightly izihlangu eziningi. Bakhonza futhi ukuhlonza izimpawu empini, bese izimpawu abazalwa yizicukuthwane, Ukukhonza lawobaba, nesibindi siqu. isayensi Heraldic study butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela imfundo amajazi izikhali, zonke izimpawu engokomfanekiso esingokwemvelo, umlando kanye ukuvela labo noma ezinye izimfanelo Chivalry umndeni. Esikhathini elingenamikhono izingalo akukho engadingekile, azikho ukrashatelskogo.
Ukubaluleka ingxenye ngayinye
Kasibili konke: ukuma, ingemuva, ilungiselelo lezinombolo, iyiphi zinyakaze - athwala incazelo. Isithombe ongamtshela indoda owazi konke mayelana umninikhaya: kulokho clan kungokwalabo Yiliphi izwe, noma ngisho umuzi, wazalwa futhi edumile. Knightly izingalo Ephakathi - uhlobo abanikazi iphasiphothi. Zonke ensimini elingenamikhono izingalo ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili - lona ongenhla (isahluko) futhi phansi (unyawo). heraldry Modern ezikhishwe eziningana amakilasi izifanekiselo - benching futhi umndeni, izifanekiselo ngomshado noma ngokulandelana, protectional kanye Royals. elingenamikhono yokuqala knight sika izikhali nge yisiqubulo okuyinto kukhona idatha zomlando okungokukaNkulunkulu Bala Anzhuysuomu, uGeoffrey Plantagenet alifani nelamuntu. It kungokwalabo 1127.
Inkathi enhle courtly
Ukuvela Chivalry, kanye nokwehla yayo, ngenxa yesidingo zomlando. Ephakathi - kuyinto feudalism. abanikazi Land kudingeka bavikele impahla yabo. Knights ziyaphuma njengoba amaqhawe onogada impahla suzerain. Bazalwa ku franc isimo, nakuba kunezimpande kula mabutho wamaRoma. Chivalry zinyamalale leholele yebutho njalo nge ukuzithiba kubumbana. Nokho, Knights Ephakathi ngaleso sikhathi ziwukuphela amandla kwangempela uyakwazi ukuvikela isimo futhi anqobe amazwe amasha, isibonelo Zenkolo, ungenelwe ukuze kuvikelwe Lethuna Elingcwele kusukela Seljuk nabaseTurkey. Ngaphezu kwalokho, Knights kuhlobisa futhi ukusekela umphakathi. Babefanele nesiko labo, Minstrels yabo, isimo yayo - konke ukuthini igama elithi enhle "uyiqhawe".
I-GTA 5: izindawo ezithakazelisayo emhlabeni nasemanzini